Isbaheysiga Xisbiyada Siyaasadda oo ku baaqay haddii la heshiin waayay in dib loogu noqday Baarlamaanka Soomaaliya – Kalfadhi
Isbaheysiga Xisbiyada Siyaasadda oo ku baaqay haddii la heshiin waayay in dib loogu noqday Baarlamaanka Soomaaliya
April 8, 2021 April 8, 2021 Hassan Istiila
Madaxda Isbaheysiga Xisbiyada Siyaasadda oo shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Muqdishu, ayaa sheegay in ay oggaayeen in uu fashil kusoo dhammaanayo shirkii madaxda dowladda federaalka iyo maamul-gobolleedyada, madaama laga wadda-hadlayay doorasho aan sharci iyo dastuuri midna aheyn.
Cabdiraxmaan Suleymaan Jaamac oo ah Guddoomiyaha Xisbiga Shacabka, ayaa sheegay in waxa laga doodayay ay ahaayeen wax aan dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed, isaga oo aad u ammaanay tanaasulkii ay sameysay dowladda federaalka.
“Dowladda waxaa ay ka tanaasushay heshiiskii doorashada ee Qof iyo Cod ee Baarlamaanka uu meel mariyay iyo sharciyadii xisbiyada. Haddii la heshiin waayay waa in dib loogu noqdaa Baarlamaanka Soomaaliya” ayuu raaciyay hadalkiisa.
Madaxda Isbaheysiga Xisbiyada ayaa xusay in dowladda iyo Labada Aqalka ee Baarlamaanka ay gacanta ku hayaan mas’uuliyada dalka lagana rabo in dowlad lasoo doortay ay ku wareejiyaan xilka, isla markaana ay qabtaan doorashada.
Akhriso: War-saxaafadeed ay wadajir usoo saareen Puntland iyo Jubaland oo ku saabsan shirka doorashada